भरतपुरकी मेयर रेणुले शालिकराम मृत्यु र रबि पक्राउ प्रकरणबारे बल्ल मुख खोलिन, विज्ञप्तिसहित — Sanchar Kendra
भरतपुरकी मेयर रेणुले शालिकराम मृत्यु र रबि पक्राउ प्रकरणबारे बल्ल मुख खोलिन, विज्ञप्तिसहित
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरण अस्वभाविक भएको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सम्बन्धित पक्षलाई अपील गरेकी छन् । मेयर रेणु दाहालले पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणबारे बल्ल मुख खोलेकी छिन । मेयर दाहालले उक्त प्रकरणमा सम्बन्ध र सरोकार नभएका उच्च राजनीतिक नेतादेखि आफ्नै पनि मानाहानी हुने काम बहेको भन्दै भत्र्सना गरेकी छिन् । विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले हत्या प्रकरणको छानबिन, त्यसको न्यायीक काम जिम्मेवार निकायबाट भइरहेका कारणले अनुसन्धानमा प्रभावित हुने तथा घटनामा कुनै सम्बन्ध नभएका राजनीतिक व्यक्तिलाई मुछ्नु राम्रो नहुने जनाएकी हुन् ।
विभिन्न व्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमाफर्त भएका त्यस्ता गतिविधिको लहडलाई विश्वास नगर्न अपिल गरेकी उनले उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने जनाउँदै निर्दोष नफस्ने र दोषी नउम्कने वातावरण हुनुपर्ने जिकीर गरेकी छन् । यसैबीच प्रहरीले रवि लामिछानेका २३ जना समर्थक विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । लामिछानेको गिरफ्तारी विरुद्ध चितवनमा प्रदर्शनमा गर्दा उग्र स्वभाव देखाएको र उच्छृङखल गतिविधि गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दता गरेको हो । प्रहरीले २३ जनालाई नै पक्राउ गरिसकेको छ । चितवनको भरतपुरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक एकनारायण कोइरालाले प्रदर्शनमा उश्रृङखल गतिविधि गर्ने र भीडलाई उत्तेजित पार्ने २३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिएका हुन ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएका रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै जुलुस निकाल्ने मध्ये प्रहरीले २३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले जुलुसमा सहभागी ११ जना पुरुष र १२ जना महिलालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसमध्ये साउन ३२ गते ४ जना पक्राउ गरेको थियो । त्यसैगरी भदौं २ गते १० जना र ३ गते ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरु सबैलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उनीहरुमाथि प्रहरीले सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये केही धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् ।
रवि लामिछानेलाई अदालतमा पेश गरिएको पहिलो दिन पक्राउ परेका ४ जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले पाँच पाँच सय रुपैंया धरौटीमा रिहा गरेको थियो । १० जनाको हिजो मुद्धा दर्ता भएको र बाँकी ९ जनाको बुधवार मद्दा दर्ता गरिएको हो । चितवन प्रहरीले प्रदर्शनका नाममा उश्रृङखल गतिविधि गरे पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी दिए। रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि उनका समर्थकहरुले जुलसु र सामाजिक सञ्जालमा आक्रमक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई अदालतले सुरुकै दिन धरौटीमा रिहा गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । रवि आफैले आफूमाथि गलत आरोप लगाइएको भए पनि शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न आफुले प्रहरीलाई सहयोग गर्ने बताएका पनि थिए । तर, रविलाई धेरैको अनुमान र अपेक्षा विपरित अदालते १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ । प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान हेर्दा अझै केही दिन म्याद थपेर राख्ने सम्भावना देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार रविमाथिको अनुसन्धान लम्बिनुमा एक प्रमुख कारण रहेको छ प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा भइरहेको अध्ययन । नारायणगढको एक होटलमा झु’न्डिएको अवस्थामा फेला परेका रविका पूर्व सहकर्मी पत्रकार शालिकराम पुडासैनीसँग भेटिएका सामानको यतिखेर प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा अध्ययन भइरहेको छ । उनको पोष्टमार्टम रिपोर्ट भने आइसकेको छ । तर, मृत शरिरका साथमा भेटिएका अन्य सामानहरुको जाँच भइरहेको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट भने अहिलेसम्म कुनै रिपोर्ट आउन सकेको छैन ।
सोही कारण रवि माथिको अनुसन्धान अझै नसकिएको प्रहरीले बताउँदै आएको छ र चितवन जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल मार्फत म्याद थप गराउन माग गर्दै आएको छ । यसक्रममा पहिलो पटक १० दिन र पछिल्लो पटक पनि १० दिन म्याद थप्न माग गरे पनि प्रहरीले दुबै पटक पाँच पाँच पटक गरी १० दिन म्याद थप गरेको छ । तर, अझै पनि त्यो रिपोर्ट आउन समय लाग्ने स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशालाले रिपोर्ट ढिला दिनुमा अन्य कारण भने होइन । विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पुगेको सबै सामानहरुको जाँच गर्दा त्यसको रिपोर्ट र पोष्टमार्टमको रिपोर्टमा फरक फरक देखिएको स्रोतको दावी छ । त्यसरी फरक फरक तथ्य देखिएपछि विज्ञहरुले त्यसलाई दोहोर्याइ तेहेर्याइ जाँच गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा त्यसको समय बढी लागेको स्रोतको दावी छ । यसरी हेर्दा जाँच अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ । प्रयोगशालाकै जाँच नसकिएपछि उता रविलाई दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि गुज्रेर फेरि म्याद थपाउन सक्ने देखिएको बताइन्छ ।
यता पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमामा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने अहिले चितवन प्रहरीको हिरासतमा छन् । बुधबार हिरासतभित्रबाटै उनले तेस्रो श्रीमतीका रुपमा भित्र्याएकी निकिता पौडेललाई सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेख्न लगाए । निकिताले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बुधबार साँझ स्टाटस लेखिन- ‘यो घटनालाई लिएर प्रहरीले मलाई ५ बर्षनै थुन्ने नियत देखाएको हुँदा देश तथा विदेशमा रहनु भएका मेरा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने मलाई हिरासतबाट निकालेको ५ मिनेटभित्रै यो घटनामा मेरो कहि कतै संग्लनता छैन भनेर म प्रमाणित गर्न सक्छु ।’
रविले श्रीमती निकितालाई यस्तो स्टाटस लेख्न लगाएर फ्यानहरुलाई ‘इमोशनल ब्ल्याकमेल’ गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । निकिताको स्टाटसलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला सुरु भएको छ । पत्रकार किशोर श्रेष्ठ, संकेत कोइराला र चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेकी रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल खाली हात फर्काइदिएपछि रविले सामाजिक सञ्जालको सहारालिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । पौडेल बुधबार दिउसो महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठसहित तीन जनाविरुद्ध जाहेरी लिएर पुगेकी थिइन् ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आफ्ना श्रीमान् रवि लामिछानेविरुद्ध बोलेको ‘डाइङ डिक्लेरेसन’ भिडियो किर्ते गरेको भन्दै उनले जाहेरीमा जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ, नेपाल आज अनलाइनका सम्पादक संकेत कोइराला र चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लविरुद्ध जाहेरी लिन प्रहरीलाई आग्रह गरेकी थिइन् । तर, प्रहरीले प्रमाण नपुग्ने भन्दै उनले दिएको जाहेरी फिर्ता गरेको थियो ।
पौडेलले दिएको जाहेरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले दर्ता नगरी चितवन जान सुझाव दिएको छ। घटना, भिडिओ, आरोपीहरूमाथि चितवन प्रहरीले नै छानबिन गरिरहेकाले निकिताको जाहेरी काठमाडौंबाट हेर्न नमिल्ने भएकाले उतै जान सुझाव दिएको प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले बताए। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि निकिता सोही जाहेरी लिएर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं पुगेकी छिन् । यस्तो छ निकिताले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको स्टाटस:
”शालिक राम पुडासैनीको घटनाको बिषयमा मैले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउ पुर्याउछु भनेको थिए र पाँचौ दिन सम्म हिरासतमा रहदा मैले मेरा तर्फबाट पूर्ण रुपमा प्रहरीलाई सहयोग गरे पनि । म, र मेरा सहकर्मी युवराज कडेल र यो घटनामा नाम जोडिएकी अस्मिता कार्की रुकुको बयान लिए पश्चात यो घटनामा हाम्रो कहि कतै संग्लनता नदेखिएको पोईन्ट वाईज स्पष्ट भईरहेको बेला फेरी पाँच दिनको म्याद थप्दै प्रहरीले चलाएको कदम हामीलाई फसाउँने गरी सुनियोजित र नियतपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । पाँचौ दिन सम्म मैले प्रहरीसँग आफू सुरक्षित रहेको महसुश गरेको थिए तर आजबाट भने म प्रहरीसँगै नै असुरक्षित भएको महसुश गरेको छु ।
तसर्थ अन्य तर्फको अनुसन्धान अगाडी बढाउँनु पर्नेमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले मेरो फोनको कल डिटेल निकाल्न समय लगाएको बिषयमा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु । प्रहरीले दुई दिन भित्रै कल डिटेल सजिलै निकाल्न सक्छ तर मलाई फसाउँने नियत सहित समय लम्बाएको बिषयमा मैले आफूलाई यहाँ भित्र असुरक्षित रहेको महसुश गरेको हुँ । यो घटनालाई लिएर प्रहरीले मलाई ५ बर्षनै थुन्ने नियत देखाएको हुँदा देश तथा विदेशमा रहनु भएका मेरा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने मलाई हिरासतबाट निकालेको ५ मिनेटभित्रै यो घटनामा मेरो कहि कतै संग्लनता छैन भनेर म प्रमाणित गर्न सक्छु । रवि लामिछाने”
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि तयार पारेको भिडियो क्लिप्स सार्वजनिक भएको विषयमा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले उक्त भिडियो कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । आत्महत्या अघि खिचिएको एक भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । जसमा पुडासैनीले आफ्नो मृत्युको कारण पत्रकार लामिछानेसहित तीन जना रहेको बताएका थिए ।
भिडियो कसरी बाहिरियो भन्ने सवालमा सम्पादक किशोर श्रेष्ठले लामो फेसबुक स्टाटस लेख्दै यसो भनेका छन् :
मेरा स्तम्भकार मित्र संकेत कोइराला ‘नेपाल आज’मा पनि संलग्न भएको र उहाँहरुसमेतले पत्रिकाबाट उक्त खबर धेरैवटा अनलाइनले साभार गरिसकेको हुँदा हामीले पनि पोस्ट गर्न पाउँ न भनी आग्रह गर्नुभएबमोजिम ती Video सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइएको हो । सँसारभरका पत्रकारको पहिलो कर्तव्य प्राप्त प्रमाणित सामग्री अरु कसैले भन्दा पहिले आफ्ना दर्शक र श्रोतासामु प्रस्तुत गर्नु हुने गर्दछ ।
त्यही कर्तव्य पालना हामीबाट पनि भएको हो तर यसवीच केही मित्रले वास्तविकतै नबुझी, आफूखुसी काल्पनिक कथा छापी स्वार्थसिद्ध गर्न र परिस्थितिलाई अर्कै दिशातर्फ मोड्न चाहेको देखियो ! उक्त Video को कन्टेन्टबारे हाम्रो भन्नु केही छैन । सरोकारवाला निकायले नै अनुसन्धानबाट खुट्याउलान् । हाम्रो भनाइ त यति मात्रै हो कि यस प्रकरणमा बिश्वभरका एक से एक IT बिज्ञहरुलाई झिकाएर त्यति समयभन्दा बढीको video clip छ भने रिकभर या प्रमाणित गरेर देखाए हुन्छ । जब कूल १३ मिनेट २४ सेकेण्डभन्दा लामो video नै खिचिएको छैन भने Edit गरेको या कसैलाई हुने, कसैलाई नहुने गरी प्रकाशन या प्रशारण गरिएको प्रश्नै उठ्दैन !
हामीले अफिसियल रुपमै रविजीलाई पोहोर पनि बिदेशी नागरिकता र राहदानी त्यागेर नेपाली बनी, आफ्नै देशको एक असल Tax Payer का हैसियतले कानूनी रुपमै पत्रकारिता थाल्न बिनम्र आग्रह गरेका video clip हरु थyoutube मा सर्च गर्दा पाउन सक्नुहुन्छ । न हाम्रो पुरानो चिनाजानी, न बिट एउटै, न एकार्काको प्रतिस्पर्धी, न त कुनै दुश्मनी नै । सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण हुनेले कहिल्यै पनि आउनोस, मिलिजुली देश र जनताको हित अनुकूल पत्रकारिता गरौं भन्दै यसखाले सुझाव दिँदैन ।
३३ बर्षको पत्रकारिता जीवनमा हामीले थुप्रै आरोह–अवरोह झेलेका छौँ र सबै सबै देशबासीप्रति पुनः यो पनि विनम्र आग्रह गर्दछौं कि अनाहकमा कोही, कसैमाथि, कहिल्यै पुस्ट्याई बिनाका आरोप नलगाऊँ । हाम्रो पेशागत कर्म र धर्मबारे केही भ्रम भए या लेख्न मन लागे सीधै सम्पर्क गर्दा हुन्छ । सक्दो जानकारी दिन हर्दम तयार छौँ । हाम्रा कुनै पनि गतिविधि अपारदर्शी छैनन् । अनि हामीले झेलेको बिगत र लगाइएका झूठ आरोपहरु तथ्यको कसीमा लल्याकलुलुक गलेका उदाहरण निकट विगतमै छन् । गल्ती नगर्दासम्म कसैले आत्तिनु पर्दैन भन्ने कुराका हामी आफै भुक्तभोगी हौं ।
र, हामीले कानूनी प्रक्रियाबाटै आफूमाथिका समुच्च आरोपको न्यायिक निरुपण गरेका छौँ । पुनश्च : video प्रकरणको वास्तविकतालाई आफ्नो निहित स्वार्थबस् तोडमरोड नगर्न र हाम्रो पेशागत आचरण तथा तपाईं हामी आफ्नै लेखनप्रति जनविश्वासको असामयिक अवसान हुन नदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । वस्तुनिष्ठ आलोचना र सिर्जनात्मक सुझावको सधैं सम्मान गर्ने नै छौं ।’